जो शहर सबैभन्दा वातावरण संसारमा संवेदनशील को शीर्षक योग्य? केही ठाउँमा जनसंख्याको स्वास्थ्य र जीवन एक वास्तविक खतरा छ? हामीलाई संसारमा शीर्ष 10 भन्दा प्रदूषित शहर चयन गरौं।
Sumgait को अजरबैजानी शहर अन्तिम शताब्दीको 40S मा स्थापित भएको थियो। सुरुमा एक धेरै तीव्र जनसंख्या वृद्धि त्यहाँ छ। बासिन्दाहरू संख्या एक लाख को एक चौथाई भन्दा बढी शताब्दीको बीचमा द्वारा। चाँडै नै त्यहाँ उत्सुक हुनेछौं आवास को कमी महसुस गर्न थाले। तसर्थ, जनसंख्याको ठूलो भाग बस धेरै हस्टल cramped कोठा मा huddle थियो।
तथापि, आवास घाटा Sumgayit छैन मुख्य समस्या को बासिन्दा लागि थियो। को सचित्र क्षेत्र रासायनिक बिरुवाहरु को एक सम्पूर्ण धेरै concentrating मा, धेरै दशकसम्म जो गतिविधि एक झुलसे मरुभूमि को एक पटक सुगन्धित प्रकृति परिवर्तन गरेको छ।
हाल Sumgait बारेमा 2,60,000 मानिसहरू गर्न अजरबैजानी राजधानी बाकु, घर देखि 30 किलोमिटर दूरी मा स्थित छ जसमा। सोभियत समयमा, यो रसायन को एक विस्तृत विविधता निर्माण मा लगे जो शहर, को जिल्ला 40 कारखानों छ। यस्तो "Khimprom", "एल्यूमिनियम प्लान्ट", "जैविक संश्लेषण" को रूपमा सबै भन्दा ठूलो उद्यम, अझै पनि पूर्ण क्षमता मा सञ्चालन छन्।
क्लोरीन-समावेश यौगिकों, रबर, भारी धातु, साथै कीटनाशक को निर्माण, घरेलू क्लीनर को प्रक्रिया बाट परिणाम जो 70 120 टन हानिकारक उत्सर्जन देखि निकालेको शहर भन्दा माहौल मा प्रत्येक वर्ष को लागि। आज, पर्यावरण निगरानी गर्न धन्यवाद, क्षेत्र प्रदूषण रोकियो। तथापि, हावा मा जारी छन् पनि ती पदार्थ, स्थानीय पानी पर्याप्त र माटो प्रयोग गर्न अयोग्य हुन्छ।
प्रतिकूल पारिस्थितिक अवस्था तर जनसंख्या को स्वास्थ्य असर गर्न सकेन। त्यसैले, जीवन खतरामा रोगहरु को स्तर देश को अन्य इलाकों तुलनामा 50% भन्दा उच्च हो। यो Sumgait सालाना संसारको सबैभन्दा प्रदूषित शहर को स्तर प्रवेश कि आश्चर्य छैन।
दुनिया मा 10 भन्दा प्रदूषित शहर सर्वेक्षण जारी, एक Linfen नाम अन्तर्गत सबै भन्दा ठूलो औद्योगिक चीन मा केन्द्र को एक बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। यो देश को मुख्य कोइला-खानी क्षेत्र मा स्थित छ। प्राकृतिक वरपरको ईलाका अझै खनिज को निकासी लागि बारुद संग डट पहाडी। यसबाहेक, बारुद को थोक अवैध उत्पादन बनाउन। घडी को आसपास आफ्नो काम बर्बाद मैला पार्नु माटो र भूमिगत जम्मा।
तथापि, धेरै खान अपेक्षाकृत सानो समस्या हो। को बारुद साथै, कोइला प्रक्रिया बिरुवाहरु दर्जनौं शहर जिल्ला सञ्चालन। जनसंख्या वृद्धि, नव आइपुगे कार्यकर्ता replenished छ जो, र कार को संख्या बढ्यो साथ। स्थानीय व्यवसायबाट माहौल मा विषाक्त पदार्थ को आफ्नो संयुक्त निकास उत्सर्जन माहौल मा विपत्तिजनक आर्सेनिक सामग्री नेतृत्व गरेका छन्।
शहर बासिन्दा खतरनाक toxins फिल्टर र आंशिक रूपमा कास्टिक चारकोल गंध हटाउनु भनेर सुरक्षा मास्क मा बाहिर जाने गर्नुपर्छ। वायु प्रदूषण Linfen मा लुगा धुने पछि अंडरवियर, झ्याल को ह्याङ्आउट कि केही मिनेट पछि पूर्ण कालो भएको छ त महत्त्वपूर्ण छ। शहर को धेरै बासिन्दा ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अन्य फोक्सो रोग बाट पीडित छन्।
हामी संसारमा सबैभन्दा प्रदूषित शहर विचार गर्न जारी। अर्को हाम्रो स्तर मा - काबवी शहर, जाम्बिया गरेको राजधानी को अफ्रीकी राष्ट्र देखि 150 किलोमिटर स्थित। यसलाई नेतृत्व-धनी चट्टानहरु को संसारको सबैभन्दा ठूलो जम्मा यो ईलाका लागि ज्ञात छ। यहाँ शताब्दीयौंको दौडान औद्योगिक विषाक्त धातु को गति mined। क्षेत्र मा पर्यावरण अवस्था नियन्त्रण कमी महत्वपूर्ण निम्त्याउँछ वायु प्रदूषण, भूमिगत र माटो। बाट किलोमिटर दसौं एक दूरी मा शहर को वेल्स देखि खतरनाक पिउन छैन, तर पनि बस हावा श्वास फेर्न गर्न गरेको। छैन अचम्मको कुरा, रगतमा नेतृत्व यौगिकों को प्रतिशत शहर को जनसंख्या 10 भन्दा बढी पटक अनुज्ञेय सीमा नाघेको छ।
संसारको सबैभन्दा प्रदूषित शहर को सूची पतन र रूसी Dzerzhinsk। यो बन्दोबस्त को सोभियत पैतृक रासायनिक कच्चा माल प्रशोधन लागि विशाल औद्योगिक परिसर छन्। मात्र 1930 स्थानीय माटो बाट अवधिमा विषालु यौगिकों को 300 भन्दा बढी हजार टन "सार्थक"।
पछिल्लो अनुसन्धान अनुसार, आज स्थानीय पानी मा जीवन खतरामा फिनल र carcinogenic dioxins संख्या केही हजार पटक प्रदर्शन स्तर भन्दा बढी। 47 वर्ष - औसत पुरुष जीवन बारे 42 वर्ष, र महिला छ। माथिको दिइएको, यो Dzerzhinsk जो संसारको पारिस्थितिकी सबैभन्दा प्रदूषित शहर हो सूची, समावेश गर्ने छैन अचम्मको छ।
यसको अस्तित्व को पहिलो वर्ष देखि, रूसी Norilsk जो हावा गरेर विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहर हो सूची, थपियो। पछिल्लो शताब्दीको 50-एँ संग, यो शहर ग्रह मा भारी उद्योग नेताहरू एक हुनुको एक प्रतिष्ठा छ।
निकल र तामा को क्षय को विषाक्त उत्पादनहरु को 1000 टन भन्दा बढी स्थानीय emits मा सालाना देश मा पर्यावरण अवस्था को नियन्त्रणको लागि संगठन बाट नवीनतम डाटा अनुसार। हावा मा महत्वपूर्ण सल्फर आक्साइड संग संतृप्त। फलस्वरूप, स्थानीय जनसंख्याको औसत जीवन 10-15 वर्ष देश बाँकी तुलना गरेर कम थियो।
ला Oroya को पेरू औद्योगिक केन्द्र पनि जहाँ विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित शहर हो शीर्ष मा पर्छ। जहाँ अयस्क जम्मा भन्दा साधारण धातु केंद्रित गर्दै Andes, को तलहटी मा स्थित थोरै क्षेत्र शहर। धेरै दशकहरु को पाठ्यक्रम भन्दा एक औद्योगिक मात्रा मा नेतृत्व, तामा, जस्ता र अन्य खनिज को निकासी मा संलग्न छन्। यस मामला मा, पर्यावरण अवस्था क्षेत्र मा सम्बन्धित संगठनहरूले पर्यवेक्षण बिना रहनेछ। दुःखको कुरा त्यहाँ बच्चाहरु बीचमा उच्चतम मृत्यु दर छ जहाँ एक स्थानको रूपमा दक्षिण अमेरिका भर ज्ञात ला Oroya शहर आज।
संसारको सबैभन्दा प्रदूषित शहर विचार भारतीय औद्योगिक केन्द्र Sukinde ध्यान गर्नुपर्छ। यो देशमा क्रोमियम को 95% भन्दा उत्पादन गर्छ। केही दशक भित्र शहर को फलस्वरूप, यो एक वास्तविक बर्बाद डम्प भएको छ। गाउँमा को जिल्ला, त्यहाँ पूर्ण मानिसले बनाएको मूल हो भनेर धेरै Mounds छन्।
Sukinde माथिको वातावरण टन hexavalent क्रोमियम निकालेको। यो शरीर मा क्यान्सर कक्षहरूको गठन गर्न जान्छ कि एक शक्तिशाली उत्प्रेरक रूपमा चिनिने पदार्थ हो। एक क्यान्सरज को ठूलो परिमाणमा स्थानीय हावा मा, तर पनि माटो र पानी, पिउनका लागि शहर को बासिन्दा द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो मात्र फेला परेन।
जानिन्छ, वर्षौंदेखि भयो जो Chernobyl प्रकोप, यो दिन सबै भन्दा भयानक मानिस-कारण ग्रह मा मानिसजातिको इतिहासको दुर्घटना रहनेछ। एक आणविक रिएक्टर शक्ति बिरुवाहरु को विस्फोट पछि पहिलो वर्ष पहिले नै, जनसंख्याको बीचमा सिकार संख्या 5.5 मिलियन को आंकडा पार भयो। ठूलो-मात्रा दुर्घटना जीवनको लागि अनुपयुक्त गरे मात्र Pripyat को निकटतम शहर हो, तर पनि गाउँ वरिपरि 30 मी को बहिष्करण क्षेत्र को अर्धव्यास को गठन गर्न पुगे।
हरेक वर्ष Chernobyl लगातार जहाँ विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित शहर हो सूची, मा सब छ। सार्थक प्लुटोनियम र युरेनियम को टन सयौं अझै पनि एक dilapidated रिएक्टर स्थित छ जसमा क्षेत्रमा ध्यान छ। सरकारी डाटा अनुसार, बहिष्करण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ के को क्षेत्र मा, त्यो बारेमा पाँच लाख मान्छे बाँच्न जारी छ।
वापी भारतीय शहर 70 भन्दा बढी हजार मान्छे ओगटेको छ। ती सबै जहाँ त्यहाँ मानव स्वास्थ्य र जीवन जोखिम बढेको छ क्षेत्रमा छन्। पर्यावरण संगठनों को डाटा रूपमा, हाल त्यहाँ विषाक्त पदार्थ स्थानीय सफा हावा, पानी र माटो अनुमति हुनेछ भन्ने कुनै प्रविधि छ।
वापी बारेमा 400 किलोमिटर देशको औद्योगिक बेल्ट लम्बाइ को क्षेत्र मा स्थित छ। स्थानीय कारोबार जो शहर को जिल्ला मा एक पूर्ण मनपरी स्थानहरूमा अप थुप्रो रिसाइकिलिंग लागि धन, लागत जोगिन। वापी पनि नजिकका बस्तियों लागि फोहोर फाल्ने ठाउँको एक प्रकारको छ।
यहाँ फोहोर रसायन, कपडा, तेल शोधन उद्यमको एक विशाल संग्रह छ। भारी धातु toxins, कीटनाशक, समावेश नदी र भूमिगत पानी मा क्लोरीन र पारा पदार्थ दैनिक गिरावट, जो स्थानीय जनसंख्या लागि पिउने प्रमुख स्रोतहरू बाँकी छन्। पर्यावरणीय आपदा को मात्रा बुझ्न, बस नदी Colac, वापी नजिकै स्थित छ जो देखो। शोधकर्ताओं अनुसार, उत्तरार्द्ध को पानी मा बिल्कुल कुनै जैविक जीवन छ।
त्यसैले हामी संसारको सबैभन्दा प्रदूषित शहर साँच्चै आफ्नो स्थिति योग्य के देख्यो। वास्तवमा, जीवन खतरामा बस्तियों को सूची विश्वभरिका शहर सयौं समावेश छ। हाम्रो र्याङ्किङ्ग मा हामी मात्र सबैभन्दा हडताली उदाहरण प्रकृति मानिसको एक लापरवाह मनोवृत्ति र आफ्नो वासस्थानमा थियो प्रस्तुत छ।
मास्को मा कारण म्यान्टिस आक्रमण के हो?
राष्ट्रिय पार्क र इर्कुत्स्क क्षेत्र को रिजर्व: सूची विवरण र समीक्षा
पूर्व अफ्रीका Eritrea राजधानी, वर्णन, सुविधाहरू, र रोचक तथ्य मा देश
रूस मा सबै भन्दा ठूलो समुद्र के हो? भूगोल को रहस्यहरुलाई खोल्न
यातायात प्रकाश: क्रम, वर्णन र मूल्य मा रंग
प्लास्टिक सर्जन मास्को: दर्जा समीक्षा
हेलमेट IXS र आफ्नो सुविधाहरू
लौरा Benanti: जीवनी, क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
कारणहरू र बानी संग संघर्ष को विधिहरू: छोराछोरीले नङ किन दु: ख गर्छन्
पाल शिविर कसरी चयन गर्न
एक बच्चा मा ब्रोंकाइटिस? लक्षण हरेक अभिभावक ठेगाना गर्नुपर्छ!
Formalin। यो सामान के हो?
हामी किन पैसा चाहिन्छ? पैसा को उद्भव
महिला जोडाहरू र मकर मानिसको Sovmestimosmost जोडी
कुखुराको माटोमा रातो खानेकुरा। व्यंजनहरू र सिफारिसहरू